फेसबुकलाई झट्का, लाग्यो ५ अर्ब डलरको जरिमाना, यस्तो छ कारण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वासिङ्टन (एजेन्सी)। लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमाथि ५ अर्ब डलरको जरिमाना लागेको । क्याम्ब्रीज एनालिटिका डेटा स्क्याण्डलका कारण फेसबुकमाथि अमेरिकाको फेडरल ट्रेड कमिसन (एफटीसी)ले यस्तो जरिमाना लगाएको हो। फेसबुकले गोपनीयता पुल र क्याम्ब्रीज एनालिटिका स्क्याण्डल सेटलमेन्टका लागि ५ अर्ब डलर दिनुपर्ने एफटीसीले बताएको हो।
एफटीसीले फेसबुकमाथि कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । उसले फेसबुकमाथि अन्य धेरै आरोप लगाएकोसमेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले बताएका । यी आरोप मध्ये फेसबुकमा यूजर्ससँग झुटो बोल्नु, गोपनीयतामाथि खेलवाड गर्नु र सुरक्षाका लागि यूजरले दिएका फोन नम्बरका माध्यमबाट विज्ञापन दिनु रहेका छन् ।
एफटीसीले फेसबुकमा यूजरलाई फेशियल रिकोग्निशनबारे पनि झुटो बोलेको आरोप लाएको छ ।
एफटीसीले आर्थिक जरिमानामात्र लगाएको छैन हरेक नयाँ उत्पादन र सेवाका लागि गोपनीयता समिक्षा गर्ने र यस्तो समिक्षा हरेक तीन महिनामा सीईओ र थर्डपार्टीलाई दिइने जनाइएको छ ।